सकियो मन्त्रिपरिषद् बैठक, लकडाउनबारे के भयो निर्णय ? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः लकडाउनबारे छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीकाे सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएको छ ।
बैठकमा लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनबारे छलफल भएको बताइएको छ । बैठकले लकडाउन खुकुलो पार्ने मोडालिटी दुई दिनभित्र पेश गर्न कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस कीर्तिमानी पदक विजेता गौरिकाले ५९ लाख पाउने !
समितिले ल्याएको कार्ययोजनापछि मन्त्रिपरिषदको फेरि बस्ने बैठकले लकडाउनको मोडालिटी तय गर्ने एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार लकडाउन मोडालिटी परिर्वतनबारे विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए । चैत्र १० गतेदेखि जारी लकडाउनले आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको भन्दै पछिल्लो समय लकडाउन अवज्ञा गर्नेको संख्या बढिरहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस लकडाउनमै अस्ट्रेलिया, चीन र कोरिया उड्दै नेपाल एयरलाइन्स
लकडाउन जारी रहे पनि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या भने निरन्तर बढिरहेको छ । बिहीबार मात्रै ३ सय ३४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
यो सँगै संक्रमितको संख्या २ हजार ६ सय ३४ नाघेको छ । जसमध्ये २ सय ९० जना उपचारपछि निको हुँदा १० जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुग्यो
ट्याग्स: काेराेना भाइरस, केपी शर्मा ओली, मन्त्रिपरिषद् बैठक, लकडाउन